Kenya oo Turkiga ka soo iibsaneysa gaadiid ay kula dagaalanto Al-Shabaab | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Kenya oo Turkiga ka soo iibsaneysa gaadiid ay kula dagaalanto Al-Shabaab
Kenya oo Turkiga ka soo iibsaneysa gaadiid ay kula dagaalanto Al-Shabaab
Kenya ayaa gaadiid dagaal ka iibsaneysa Turkiga
Kenya (Halqaran.com) – Dowladda Kenya ayaa qorsheyneysa sidii Turkiga uga soo iibsan laheyd gawaarida Gaashaaman iyo gaadiid kale, si ay ugu adeegsato howlgallada ay ciidamada Kenya kula dagaalamayaan dagaalamayaasha Al-Shabaab.
Kenya ayaa gawaarida nuuca gaashaaman ka iibsaneysa shirkadda Turkiga ah ee Otokar taasi oo soo saarta qalabka iyo gaadiidka ciidamada.
Gaadiidkaan gaashaaman ee ay soo saarto shirkadda Otokar ayaa waxaa mid kiiba uu xambaari karaa 12 askari oo uu ku jiro darawalka iyo hubkooda.
Dowladda Kenya ayaa la filayaa in ay si rasmi ah bisha July heshiis ku aadan gaadiidkan la saxiixato shirkadda Otokar.
Shirkaddaan Turkiga ayaa horey waxaa ay gaadiidkan uga iibisay dalal kale oo Afrikan ah kuwaasi oo aan la carrabaabin.
Ciidamo ka socda Kenya oo ku howlgalla magaca howgalka Midowga Afrika ee AMISOM, ayaa ku sugan Soomaaliya, kuwaasi oo dagaal kula jira ururka Al-Shabaab
Kenya oo gaadiid dagaal ka iibsaneysa Turkiga